किन भेटिँदैनन् हराएका मोबाइल ? के हो त नभेटिने कारण ?
पोखरा ३१ बैशाख ।
कतै हिँड्दा पकेटमारको निशानामा परेर मोबाइल चोरी भएको छ भने लगभग मोबाइल भेटिन्न भनेर निश्चित हुँदा हुन्छ ।
मोबाइल चोरी भए पनि आईएमईआई नम्बर छ भने भेटिहालिन्छ भन्ने धेरैले भनेको सुनिन्छ । सोही विश्वासअनुसार नै नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुमा ५०/६० को हाराहारीमा चोरी र हराएको विवरण दर्ता हुने गर्छ । तर निवेदन परेका तथ्यांकको १० प्रतिशत पनि मोबाइल पाउन मुस्किल भएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनकुमार थापाले बताए ।
के हो त नभेटिने कारण ?
नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिले आईएमईआई कोडका आधारमा चोरिएको मोबाइल सजिलै भेटिन्थ्यो । तर अहिले अन्तरदेशीय ट्रेस सिस्टम नहुँदा मोबाइल भेटिन मुस्किल भएको हो ।
पहिले चोरी भएका मोबाइल नेपालमै सस्तो मूल्यमा बिक्री हुने गरेका थिए । मोबाइलमा कुनै सिम लगाउने बित्तिकै खोजी गर्दा भेटिन्थ्यो । तर अहिले नेपालमा चोरी भएको मोबाइल विभिन्न माध्यम तथा चोरबाटो हुँदै निर्यात हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै भारतमा चोरी भएका मोबाइल पनि नेपालमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल भित्रिएका चोरीका मोबाइल प्रहरीले पटकपटक पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानका आधारमा चोरीका मोबाइल बाहिर जाने गरेको पाइएको हो ।
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनकुमार थापाका अनुसार हालसम्म नेपालका सिमाना र काठमाडौं नाकामा धेरैपटक मोबाइल जफत गरिएको र ती मोबाइल भारतबाट ल्याउँदै गरेको अवस्थामा जफत गरिएको हो ।
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार यस चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एक हजार तीन सय ८३ वटा निवेदन परेकामा एक सय ७७ थान मात्र भेटिए । त्यस्तै भदौमा १२ हजार ९९ निवेदन परेकोमा एक सय ६०, असोजमा एक हजार एक सय ७० निवेदन परेकामा एक सय ४०, कातिकमा एक हजार एक सय ७२ निवेदन परेकामा एक सय ६७ वटा, मंसिरमा एक हजार तीन सय ५४ वटा निवेदन परेकामा एक सय ९७, पुसमा एक् हजार तीन सय ९१ वटा निवेदन परेकामा एक सय ९८ थान, माघमा एक हजार छ सय चार वटा निवेदन परेकामा दुई २० भेटिए । त्यस्तै फागुनमा एक हजार तीन सय ८७ वटा निवेदन परेकामा एक सय ९७, चैतमा एक हजार दुई सय ४२ वटा निवेदन परेकामा एक सय ८४ थान र वैशाखमा एक हजार एक सय १९ वटा चोरीका निवेदन परेकामा एक सय ६७ थान मात्र भेटिएको छ भने बाँकी खोजतलास गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा हराएका तथा चोरीका १३ प्रतिशत मात्र मोबाइल भटिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार चोरी भएका मोबाइलको आईएमईआई कोड सहित अपराध अनुसन्धान महाशाखामा हराएको निवेदन दिएपछि त्यसको खोजी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीले कोड ट्रेसिङका लागि अदालतमा अनुमति माग्नुपर्छ । अदालतले कोड ट्रेसिङको अनुमति दिएपछि नेपाल प्रहरीले नेपाल टेलिकमलाई कोड ट्रेसिङका नम्बरहरू पठाउने गर्छन् ।
नेपाल टेलिकमले मोबाइलको ट्रेसिङ गरेर चोरिएको मोबाइल खोज्न प्रहरीलाई सहयोग गर्छ । नेपालमा हराएका मोबाइलको ट्रेसिङ नेपालभित्र प्रयोग हुने मोबाइलमा मात्र हुने गरेको हुँदा अहिले चोर बाटो भएर सीमा कटाएर बेच्ने हुँदा चुनौती भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।स्रोतः आजको न्यूज